မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း China Manufacturers & Suppliers & Factory
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း ထုတ်ကုန်များ)
စက်မှုအလိုအလျောက် PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး
အလိုအလျောက်အမြင့်မြန်နှုန်း PVC ကြိတ်စက် Shutter တံခါး သင်တစ်ဦးမြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုရှာနေလြှငျ, သေချာသင်ကျွမ်းကျင်သူများထံမှရစေ။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် install မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးနှင့်ကုလားကာ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအားလုံးကို bespoke လုပ်ပေးမသာ။...
Clear ကို ROOM တွင် PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး
PVC ကြိတ်စက် Shutter အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး 1. အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါးများအလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အပူ-ဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချချမ်းတုန်လေကြောင်းဆက်ပြီးအအေးစတိုးဆိုင်အခြေအနေများဖြစ်ပါသည်, ဦးစားပေးအပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းထားသောကုန်ကျစရိတ်ကိုထိရောက်သော insulator တွင်လည်းအတားအဆီးပေးပါ။ 2. PVC...
အလိုအလျောက်တာရှည်ခံခေါက် Up ကိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုဖွင့်ခေါက်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာ, ဆေးဝါး, အီလက်ထရောနစ်, မော်တော်ကား, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်စက်အဖြစ်အလုပ်ခွင်၏ပြင်ပနှင့်ပြည်တွင်းတံခါးကိုသက်ဆိုင်သည်။ possessess ကောင်းသောလေတိုက်ခုခံနှင့်အပူလျှပ်ကာဒီမျိုး။...
မလေးရှားကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဖျ PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး
မလေးရှားများအတွက်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဖျ PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး high-speed ကိုတံခါးများဖြစ်ကြသည် တံခါးကို အဓိကအားဖြင့်စက်မှုဇုန် applications များများတွင်အသုံးပြုစနစ်များ, ။ သူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့်လူသိများအပိုင်းတံခါးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်မြှင့်တင်မှုများဖြစ်ကြသည် PVC ထည်တံခါးများသို့မဟုတ် roller...
အလိုအလျောက် PVC အထည်အလိပ်အမြင့်မြန်နှုန်း Roll တက်
အလိုအလျောက် PVC အထည်အလိပ်အမြင့်မြန်နှုန်း Roll တက် high-speed ကိုတံခါးများများသောအားဖြင့်ကုန်စည်အသွားအလာဖြစ်ပေါ်နေရာတိုင်းမှာအသုံးပြုရှိရာတံခါးများအထူးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရှိသည်နေကြသည်။ ဥပမာအားများအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်, သို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်,...
အလိုအလျောက် PVC မြန်နှုန်းမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးကိုဖွင့်လှိမ့်ပုံ
အလိုအလျောက် PVC မြန်နှုန်းမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးကိုဖွင့်လှိမ့်ပုံ မြန်နှုန်းမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးကိုအစာရှောင်စစ်ဆင်ရေးနှင့်လျှပ်ကာလိုအပ်သည့်စက်မှုအဆောက်အဦများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်တက်လှိမ့်ပုံ။ သငျသညျအပြင်ပန်းသို့မဟုတ်အတွင်းပိုင်း applications များအဘို့သင့်အစွန်းရောက်အသွားအလာကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။...
စက်မှု PVC Roll တက်မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကို
အလိုအလျောက်စက်မှု PVC Roll တက်မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကို hongfa အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါးပေါက်နှင့်အတူတံခါးကိုဖွင့်လှစ်မှာအများဆုံးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ခွဲခြာအောင်မြင်ရန်။ မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးကို၏အဓိက function ကိုတစ်ဦးအတားအဆီးအဖြစ်ပြုမူရန်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးများ,...
လျှပ်စစ်ပလတ်စတစ်အထည်အလိပ် Rolling Hgih မြန်နှုန်းတံခါး
အလိုအလျောက်စက်မှု PVC Roll တက်မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကို Hongfa မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးများဂုဏ်သတ္တိများ forHongfa အသုံးပြုသူကိုသိသူတို့ရဲ့ client များအတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ထောက်ပံ့ဖို့သူ့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာနိုင်စွမ်း, ချုပ်လုပ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်,...
Radar အာရုံခံအတူ PVC အထည်အလိပ်အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး
Radar အာရုံခံအတူ PVC အထည်အလိပ်အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး Hoghfa စွယ်စုံလမ်းကြောင်း configurations အတွက်ရရှိနိုင်မယ့်မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်၏ကြီးမားသောစုဆောင်းခြင်း, လိပ်-Up နှင့် bi-နှုတ်ဆက်စကားဒီဇိုင်းများအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ်။ တစ်စက္ကန့်ကို 100 လက်မမှာရွေ့လျားနိုင်စွမ်း,...
သံမဏိအလိုအလျောက်ကြိတ်စက် Shutter PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး
သံမဏိအလိုအလျောက်ကြိတ်စက် Shutter PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး Shutter PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါးပေါက်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာ, ဆေးဝါး, အီလက်ထရောနစ်, မော်တော်ကား, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်စက်အဖြစ်အလုပ်ခွင်၏ပြင်ပနှင့်ပြည်တွင်းတံခါး, သက်ဆိုင်သံမဏိအလိုအလျောက်ကြိတ်စက်။ possessess ကောင်းသောလေတိုက်ခုခံနှင့်အပူ insulation.Our Hongfa...
ပြည်ထဲရေးအော်တို PVC Rolling အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး
ပြည်ထဲရေးအော်တို PVC Rolling အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး Hongfa အလွန်အမင်း high-performance ကိုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်မြင့်မားသောသန့်ရှင်းမှုရာအရပျ၏ဝယ်လိုအားနှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ကျယ်ပြန့်များစွာကို places.High မြန်နှုန်းတံခါးဝ၌အသုံးပြုကြသည်ထားတဲ့အမျိုးမျိုးသောမြန်နှုန်းမြင့်တံခါးများအတွက်အထူးပြုလုပ် s...
စက်မှုအလိုအလျောက် Rolling PVC ပြည်ထဲရေးမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး
စက်မှုအလိုအလျောက် Rolling PVC ပြည်ထဲရေးမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုအလွန်အမင်းစစ်ဆင်ရေးထိရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, စွမ်းအင်, မြန်နှုန်းမြင့်မော်တော်ယာဉ်ကိုအနီးကပ်ကယ်တင်နိုင်, high-performance ကိုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်မြင့်မားသောသန့်ရှင်းမှုရာအရပျ၏ဝယ်လိုအားနှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုငျသညျ။ အဓိက...
PVC စက်မှု Roll တက်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါးဖွင့်အလိပ်၏အားသာချက်များ 1) အဖွင့်နှင့်အပိုမြန်နေတဲ့အစဉ်အလာအပိုင်း overhead တံခါးကိုထက် 12 ကြိမ်မှတံခါးကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ်ထပိတ်ပစ်ခြင်းဖြင့်စွမ်းအင်နှင့်အချိန်ကုန်သက်သာ။ 2) ပူနွေး &...
တာရှည်ခံအစာရှောင်ခြင်း Rapid Rolling Up ကိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးပေါက် တာရှည်ခံအစာရှောင်ခြင်း Rapid Rolling Up ကိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးပေါက်တည်ငြိမ်, မြန်နှုန်းမြင့်, စွမ်းအင်ချွေတာရေး, Eco-ပတ်ဝန်းကျင်, သဲခုခံ, အင်းဆက်ပိုးမွှားခုခံ, လွယ်ကူသောပြောင်းလဲမှုနှင့်သည်စင်ကြယ်၏ ဤသည်တံခါးပေါက်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာ,...
PVC ပြင်ပ Remote Control ကိုတံခါးအီးယူ Standar
အီးယူ Standar အတူ PVC စက်မှုဇုန်ပြင်ပ Remote Control ကိုတံခါး ကျွန်ုပ်တို့၏မြန်နှုန်းမြင့်အဝေးထိန်းတံခါးကိုအလွန်လုံခြုံဖြစ်ကြသည်။ လူများသို့မဟုတ်ကားကျသွားတံခါးကိုမထိရသောအခါပထမဦးစွာမြန်နှုန်းမြင့်တံခါး, အော်တိုတုံပစ္စည်းကိရိယာများကိုသုံးပါကအလိုအလျှောက်ထခညျြနှောငျ။ ဒုတိယအကျွန်တော်တို့ရဲ့တံခါးကို၏အောက်ခြေတွင်,...
လုံခြုံရေး Roll Up ကိုမြန်လှုပ်ရှားမှုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး
လုံခြုံရေး Roll Up ကိုမြန်လှုပ်ရှားမှုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးပေါက်လူများနှင့် / သို့မဟုတ်စက်ကိရိယာများမှအဖွင့်မှတဆင့်လျင်မြန်စွာရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြု, အစာရှောင်ခြင်းပွင့်လင်းခြင်းနှင့်နီးစပ်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။...
high-speed ကိုတံခါးများအဓိကအားဖြင့်စက်မှုဇုန် applications များများတွင်အသုံးပြုတံခါးကိုစနစ်များ, ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့်လူသိများအပိုင်းတံခါးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်မြှင့်တင်မှုများ, PVC ထည်တံခါးများသို့မဟုတ် roller ဘက်မှာပြတင်းပေါက်ရှပ်ဖြစ်ကြသည်။ အဓိကကွာခြားချက်အကြမ်းခံဆောက်လုပ်ရေးမြင့်မားတဲ့ operating...
ဒီအပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လျင်မြန်စွာတံခါးကိုတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာ operating ကုမ္ပဏီတွေရဲ့စည်းမျဉ်းများအရသိရသည်, သိပ္ပံ prerogatives တုံ့ပြန်မှုကြောင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုသေချာ။...
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Roll-up မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Rolling Shutter မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းခေါက်-up မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး PVC မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး Radar မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း stack တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Hot-Sale တံခါး